Al-Shabaab oo war kasoo saartay weerarkii LIIDO - Caasimada Online
Home Warar Al-Shabaab oo war kasoo saartay weerarkii LIIDO
Muqdisho (Caasimada Online) – Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uulliyada weerarkii xalay ee lagu qaaday hotelka Pescatore ee ku yaal inta u dhaceysa Beach View iyo Oceian ee xeebta Liido.
Weerarkaasi ahaa mid uu fuliyay qof miineysan oo isku qarxiyay iridka hotelka laga galo, kaasoo qorshahiisa ahaa inuu gudaha u galo hotelka oo ay ku shirsanaayeen taliyaha ciidamada booliska Jen. Xijaar iyo tiro xildhibaano ah oo kasoo jeeda gobolka Sool.
Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerarkaasi uu fuliyay naftii hure ka tirsan iyaga oo beegsaday saraakiil iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda.
Weerarkaan ayaa waxaa ku dhintay dad shacab ah iyo dhaawaca Taliyaha ciidanka birmadka ee booliska Jeneraal Siyaad iyo taliyaha booliska saldhiga Cabdicasiis, Liibaan Shidane.
Warar goor danbe soo baxay ayaa sheegaya inuu weerarkaasi ku dhintay xogheyntii gaarka ee Taliye Xijaar, balse laamaha amniga ma aysan sheegin.
Amaanka Liido ayaa ahaa mid si weyn u adag, oo ay dadka gaadiidka ku socda sida ay kusoo galaan ay adag tahay maadaama wadooyinka laga soo galo ay xeran yihiin, kuna sugan yihiin ciidamo ka tirsan booliska.
Sidoo kale, waxaa halkaasi ku taal safaaradda Turkiga ee Muqdisho oo si weyn loo adkeeyay amaankeeda.